ဗိမာန်တော်၌လူအပေါင်းတို့သည်အညိုရောင်မျက်လုံးမိန်းကလေးငယ်အချို့ဆူညံသံ (ထုတ်လုပ်) Make - Djs, Vjs များအတွက် Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, နိုက်ကလပ် 2019
SKU: DJ သမား DROP 100 - #46 အမျိုးအစား: DJ သမား drop
ဗိမာန်တော်၌လူအပေါင်းတို့သည်အညိုရောင်မျက်လုံးမိန်းကလေးငယ်များ, (ထုတ်လုပ်) အချို့သောဆူညံသံ Make
အဆောက်အဦးများတွင်အပေါငျးတို့သ rednecks ... ငါဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ-ဟုတ်ရနိုင်! (ထုတ်လုပ်)
အဆိုပါစည်းချက် Mixin နှင့်အပူ droppin! (ထုတ်လုပ်)
ငါသည်သင်တို့၏အာရုံကိုကျေးဇူးပြုပြီးရမလား Freddie Murphy ကအဆောက်အဦး၌တည်ရှိ၏လျှင်, အိမ်ရှေ့တံခါးမှလာပါ။ သင်၏မယားသည်သင်ဒီမှာရောက်နေသိတယ်။ Repeat, Freddie Murphy ကသင်၏မယားကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦးကို exit ကျေးဇူးပြု. ... သင် busted ကြသည်! (ထုတ်လုပ်)